Xaaladda macaluusha oo ka sii daraysa iyo WFP oo ka hadashay caqabadda ay hor dhigtay Al-shabaab. – Radio Daljir
Dhadhaab, July 24 – Haya’dda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in aanay cunto gaarsiin Karin 2.2M qof oo ku nool degaanada uu maamulo ururka mayalka adag ee Al-shabaab waxana taasi ay sababaysaa in kumanaan kun oo qof ay kusoo qaxaan xeryaha qaxootiga ee Ethiopia iyo Kenya. Sidaasi waxa tiri agaasimaha hayada WFP Josetter Sheeran.
Hadalkan ayaa soo baxay iyada oo kooxda Alshabab ay sheegtay in goobaha ay ka taliyaan ayan xaaladdu gaarin heerka macaluusha ah ee warbaahinta caalamku sheegayso,isla markaana ay kooxdu ka mamnuucday in ay gudaha Soomaaliyada ay ka taliyaan ay soo galaan qaar ka mida hay?ado ay horay uga mamnuucday halkaa. Hay?adahaas waxa ka mida tan Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP.
Josette Sheeran,agaasimaha hayada WFP ayaa maalintii sabtidii ee shalay safar kutagay magaalada ay abaaruhu saameyeen ee Garissa iyo xerada qaxootiga ugu weyn aduunka ee Dhadhaab. Miss Shareen waxa ay la hadashay qaxootiga halkaasi kusugan oo iyagu ah tiro yar oo kamid ah malaaayiinta Soomaalida ah ee macaluusha ay kuhayso gudaha Soomaaliya, waxaana ay waydiisay in ay degaanadoodii ku laabanayaan hadii xaaladu hagaagto mase helin wax jawaab ah.
?Baahida iyo macaluusha sii baahaysa waxay boqolaal kun oo waalidiin Soomaliyeed ah ku khasabtay in ay u lugeeyeen xeryaha qaxootiga iyagoo horay usii kaxaysanaya hadba inta ka raaci karta caruurtooda. Tiro badan oo kuwaasi kamid ah ayaa kudhinta inta ay kusii jiraan socodkooda ku wajahan xeryhaya qaxootiga, xoolihii dadkaasi ay dhaqan jireen ayaa gabi ahaanba meesha kabaxay beerihiina wax miro ah kama soo go?in kagaadaal dhowr xili roobaad oo roob la?aan ah? ayay tiri Josette Sheeran marka ay maanta ka hadashay xaaladda macaluusha oo lagu tilmamaayo haatan mid usii gudbaysa baa?ba guud.
?Waxaan halkaan usoo lugaynayey 25maalmood waxba mahaysto lacag mahaysto? sidaasi waxa Miss Shareen u sheegay mid kamid ah qaxootiga halkaasi kusugan waxaana uu sii raaciyey in jidka uu ku soo maray dad badan oo dhulka daadsan oo macaluul darteed ay u suurta gali wayday in ay soo gaaraan Dhadhaab.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa baahi weyn qaba gudaha Soomaaliya sababtoo ah kooxda mayalka adag ee Alshabaab ayaa u diidday haya?daha gargaarka in ay cunto gaarsiiyaan, waxaana kooxdu ay beeninaysaa in macaluul ay kataagan tahay Soomaaliya iyagoo sheegaya in hadalka QM ee ah in boqolaal qof ay haatanba dhinteen uu yahay waxba kama jiraan.
WFP kama shaqayn karto Soomaalia ogolaansha la?aanta kooxaha mayalka adag darted, tan iyo sannaddii 2008-dii 14 kamid ah shaqaalaha WFP ayaa lagu dilay Soomaaliya sidaasi waxaa tiri Miss Shareen oo intaasi siiraacisay in Soomaaliya ay tahay dal laga shaqeeyo kan ugu halista badan dunida oo dhan.
Horraantii bishan July kooxda Al-shabaab waxay ogolaatay in cid kasta oo gargaar u fidinaysa dadka Soomaliyeed hadii ay muslim yihiin iyo hadii anaay ahaynba ay kashaqayn karaan gudaha Soomaalia. Haseyeeshee, markale ayey Al-shabaab go?aankaasi baddaleen iyagoo sheegaya in xayiraadii ay wali saaran tahay haya?dihii horay loo mamnuucay. Arrintaas ayaa la filayaa in ay sii badiso tirade dadka barakacaya ee ku sii qulqulaya xeryaha qaxootiga ee ka furan Kenya, Ethiopia iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo horay ula ciir-ciiraysay kumanaan barakacayaal ah.
Axmed Jookar iyo Wakaaladaha Wararka,